Tag: zvikwangwani | Martech Zone
Chipiri, February 24, 2015 Douglas Karr
Isu tinowanzo tarisa mikana yekushambadzira inoonekera zvekuti hatiendi zuva tisina kuvaona. Kunze kwekushambadzira pamabhodhi emabhodhi ndeimwe yeaya marongero. Sezvo nematanho mazhinji ekutengesa, kune mamwe marongero nemikana nemabhiribhodhi ekutengesa ayo vamwe vasingakwanise kupa. Uye ikapihwa zano rakakura, iyo kudzoka kune yekudyara inogona kutopfuura dzimwe nzira dzekutengesa. Mabhodhi emabhodhi anogona kuve nesimba rakakura kumabhizinesi mumaindasitiri ese. Mune ino infographic kubva Signarama